Sunday, December 16, 2007 by ဂျူလီယာ
ဒီရက်တော့ ကျွန်မကြားဖူးသမျှ အသီးအရွက်နှင့်ဆေးများ အကြောင်းတွေပါ အထူးသဖြင့် ကျွန်မတို့ တောင်ပေါ်ဒေသ တောရွာလေးတွေမှာ ဖျားနာမှု တစ်ခုခုဖြစ်ရင် ကုသဖို့ ဆေးရုံဆေးခန်း ဆိုတာရော ဝေးသတဲ့သေးပေါ့ အဲချိန်မှာ သူတို့တတွေ ဆေးအစားထိုး ဈေးလည်းသက်သာ ဆေးဝါးလည်းဖြစ်ဆိုတဲ့ အသီးရွက်တွေ သုံးဆောင်သုံးစွဲတာကို တွေ့ရပါတယ် တစ်ချို့သောလူတွေက သူတို့သုံးစွဲလိုက်လို့ ထိထိရောက်ရောက် ပျောက်ကင်းတာမျိုးလည်းတွေ့ ဖူးလို့ အံ့သြမိပါတယ်… ကျွန်မလည်းမှတ်မိ သလောက်တော့ ပြန်ပြောပြပါမယ် ၊ တစ်ချို့သောသူတွေလည်း သိပြီးသားတွေ ဖြစ်မှာပါ….
လေဖြတ်နေရင် ….သဘောင်္သီး အစိမ်းတစ်လုံးကို (၂) ခြမ်းခွဲ ၊ အဲဒီအခြမ်းထဲမှာ အိမ်မွေးဘဲဥ တစ်လုံးကိုထည့်ပြီး ပြန်ပိတ်ပါ သံကြိုးနဲ့ ချီပြီး မိးနဲ့ကင်ပါတဲ့ သဘောင်္သီးမဲပြီး ကျက်နေလောက်ပြီဆိုရင် အထဲမှာထည့်ထားတဲ့ ဘဲဥလေးကိုစားလိုက်ပါတဲ့ အကြိမ်များများ စားနိုင်သလောက်စားပေးပါ ပြန်ကောင်းလာပါတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်......
လေဖြတ်တာကိုကာကွယ်ချင်ရင်တော့ တစ်နေ့ကို ကြက်သွန်နီဥ အရင့်မျိုး တစ်ရက်တစ်လုံး တစ်နှစ်တိတ်ိစားပေးရုံဖြင့် လေဖြတ်ဖြင်းကို ကာကွယ်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်
သွေးတိုးသမားတွေကျတော့ အတတ်နိုင်ဆုံး ပန်းခါးများများစားပေးပါတဲ့ သွေးတိုးအတွက် အကောင်းဆုံးဆေးတဲ့ကွယ်.....
နှလုံးရောဂါ .. ..သမားတွေဟာ နှင်းဆီပန်းပွင့် အခြောက်ကို ရေစိမ်သောက်ပါတဲ့။ တရားများများထိုင်ပေးနိုင်ရင် နှလုံးရောပါသည်အတွက် အကောင်းဆုံးလို့ ကြာရပါတယ်……..
ထုံ၊ နာကျင်ကိုက်ခဲနေရင်…. မုန်ညင်းဆီ (၅) ကျပ်သား ၊ နှမ်းဆီစစ်စစ် (၅) ကျပ်သား ၊ ဓါတ်ဆီ (၅) ကျပ်သား ၊ ရှောက်သီး (၁) လုံး ၊ အရက်ဆီ (၁) ပိုင်း အဲဒါတွေအားလုံးကို အကုန်ရောစပ် လေလုံအောင်ပိတ်ပြီး (၃) ရက်တိတိ မြေမှာပြုတ်ပါတဲ့ သုံးရက်ပြည့်ရင် ပြန်လည်ထုတ်ပြီး ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲနေတဲ့ နေရာတွေ သုတ်လိမ်းပေးပေါ့တဲ့ … သောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးနော် .. ဟဲဟဲဟဲ ….
မိန်းမဘာညာဘာညာ ဖြစ်နေလို့ နာကျင်ကိုက်ခဲနေလျှင် ဂျင်းနဲ့ ထန်းလျှက်ကို ပူပူလေးကြိုသောက်လိုက်ပါတဲ့……
နားလေထွက် …ဖြစ်နေရင် သဘောင်္ရွက်အရင့်ကို မီးကင်စားပါ သက်သာပါလိမ့်မယ် လို့ ပြောကြပါတယ်........
သွေးကင်ဆာ ..သမားတွေဟာ လူအရိုး ၊ ပျားရည် ၊နံသာနီ အဲဒီသုံးမျိုးကို စပ်သောက်တဲ့ သွေးကင်ဆာအတွက် အထူးဆေးလို့ သောက်ဖူးသူတွေပြော ကြပါတယ်
HIB စဖြစ်သမားတွေက မဟာပိန်းဥကို ပါးပါးလီးပြီး အခြောက်လှမ်းပါ ။ ခြောက်ပြီးဆိုရင် အမုန့်ထောင်းပြီးပန်းခါးအမုန့် ၊ ပျားရည် နဲ့ ရောစပ်ပြီး တရက်အနည်းဆုံး (၃) ကြိမ် ၊ တစ်ခါသောက် တစ်ဇွန်း ပုံမှန်သောက်ပေးပါတဲ့.....
Welcome to C Box